Torohevitra amin'ny fitsaboana aretina geraniums avy amin'ny florist tsara indrindra - Grey rot - 2019
Ny antony mahatonga ny geranium miverina amin'ny mavo, ny fitsaboana ny jerany
Azo antoka ny filazana fa samy manana trano trano ao an-trano avokoa ny olona tsirairay, fa ny mponina ao amin'ny firenentsika kosa dia manana fitiavana manokana amin'ny geranium.
Fantatrao ve? Ny trano geranium dia antsoina koa hoe "pelargonium".
Ahoana no ahafantarana fa mila fitsaboana ny jerena
Karazan-koditra ary ahoana no hanafoanana azy
Inona no tokony hatao raha voasambotra ny ravina rehetra
Teboka misy blasaka
Grey Red Houseplant
Piaramanidina goavana indrindra
Geranium, tahaka ny zavamaniry hafa rehetra, dia manana fahavalo maro. Ny aretina isan-karazany sy ny bibikely dia mety hiteraka fiantraikany lehibe amin'ny efitrano geraniums. Ny bibikely malaza dia:
Mihanaka haingana manerana ny orinasa ny fanafody, ary raha tsy misy ny fepetra amin'ny fotoana hanafoanana izany dia mety ho very ny voninkazo.
Na dia ireo tompona manam-pahaizana sy be fiahiana aza, dia mety hitranga ny aretina amin'ny geraniums. Ny anton'izany dia mety:
ny vilany kely iray, izay tsy ahafahan'ny fototarazon'ny zavamaniry tsy mahazatra azy;
ny tsy fisiana na ny tsy fisian'ny drainage ao anaty valizy;
ny tsy fisian'ny masoandro sy ny drafitra tsy miova;
Ambim-bary misy tsiranoka miaraka amin'ny azôty, ka noho izany dia mitombo haingana ny herin'ny maitso ary manimba ny voninkazo;
potassium kely sy phosphorus kely loatra ao amin'ny tany.
Ny soritr'aretin'ny aretina geranium dia mety:
Ny fisehoan-javatra eo amin'ny ravina. Mety hiteraka bakteria sy holatra izany. Ary koa, ny endriky ny loko amin'ny pelargonium.
"Rust" eo amin'ny ravin'ny zavamaniry. Raha mahita teboka mitovy amin'ny ravin'ny voninkazo iray ianao dia midika izany fa misy holatra ianao.
Fanosihosena. Ny antony dia bakteria. Misy fahafahana hamoy ny voana raha tsy manao fitsaboana ianao.
Ny zavamaniry dia rakotra volo matevina fa tsy tranombakoka. Amin'io tranga io, ny ganôma dia naka kitay mainty.
Leaf bleaching. Izany dia manolo-kevitra fa efa nahazo tsiranoka momba ny geraniums ianao, ary ny teo aloha dia nanapa-kevitra ny hamoaka azy, ny safidy kokoa hamonjy ilay orinasa.
Ny fototeny rotaka dia manomboka noho ny fungi izay mitoetra ao anaty tany. Ny ankamaroany, dia misy fiantraikany amin'ny taratra geranium, izay miorina amin'ny tany na eo akaikin'ny tany. Noho ny fisehoan-javatra toy ny holatra toy izany dia mianjera fotsiny ny fotony.
Tsara kokoa ny manipy ny geranium misy aretina na miezaka manapaka ilay faritra voakasika amin'ny zavamaniry miaraka amin'ny antsy maranitra sy madio. Taorian 'ny fampiasana ilay fitaovana, dia tokony hotovina tanteraka izany. Amin'izay tsy misy fotony ianao, tsy mila mandevona be loatra ny geranium ianao, manatsara ny fikajiana ny tany, manampy ny mixer of vermiculite, tavy môtô na pérlite. Ny loko eo amin'ny loko dia ilaina ny mandinika ny fisavana.
Zava-dehibe izany! Mba hisorohana ny fisian'ny aretina dia tokony hifanaraka amin'ny fitsipiky ny fitomboan'ny gerianina.
Ny fisehoan-javatra eo amin'ny ravina dia manondro ny faharesen'ny voninkazo amin'ny bibikely na bibikely manimba. Tsara kokoa ny tsy manemotra sy mampihatra avy hatrany ny fepetra hanafoanana ny fandrahonana, satria ny aretina dia afaka mankany amin'ny zavamaniry mifanila aminy.
Raha mitsororoka ny ganôma ary misy toerana iray eo aminy, dia diniho tsara izany ho an'ny fisian'ny "voatabia voatabia". Azo inoana fa ho vitsy kely ireo toerana ireo. Nahita azy ireny izy ireo, ary nanara-maso ny ampahany amin'ny lembalemba. Raha misy fanambarana manokana, dia tsy maintsy hatsipy ilay voninkazo. Ny ady amin'ny tazomoka dia tsy hitondra fahombiazana, ary ny ezaky ny ezaka natao hanampiana ilay orinasa dia hitondra mankany amin'ny famindrana bakteria amin'ny voninkazo manodidina.
Fantatrao ve? Inoana fa ny kirihitra jerena nambolena teo akaikin'ny trano dia nampiroborobo ny fahasalaman'ny fianakaviana rehetra.
Ny tarehimarika eo amin'ny ravina amin'ny faritra jerany dia endrika bubbles, noho ny fiantraikan'ny fungi - Alternaria sy Cercospora. Alterinariasis sy cercopillus dia misy fiantraikany eo amin'ny endriky ny fototarazo matevina eo amin'ny ravina. Ny habaka toy izany dia mampahatsiahy tsy an-kijanona ny akofa ary mety hitarika amin'ny ravinkazo. Rehefa afaka fotoana fohy, dia miseho eo amin'ny toerana misy ilay faritra voan'ny aretina ireo spores, ary avy eo dia misy toerana maizimaizina.
Ny lokon-drongony amin'ny gerany dia vokatry ny fampidirana ny holatra. Ny rust dia manomboka mipoitra eny amin'ny tendrony mavo. Ny voka-dratsin'ny harafom-paritra dia miparitaka amin'ny tsindrona bibikely, tany maloto, na amin'ny voankazo hafa efa voan'ny aretina.
Zava-dehibe izany! Ny faharesena mahery vaika amin'ity aretina ity dia hitarika amin'ny famoahana sy hamotehana ny ravina rehetra.
Ho fanoherana ny "faritra mivaivay", ny zavatra voalohany tokony hizaranao ny voninkazo voan'ny aretina. Raha toa ka tsy nahavita nanaparitaka henjana tao anatin'ilay orinasa ny fanafody, esory fotsiny ireo ampahany voakasika. Raha toa ka misy ny endrika mihazakazaka, araho amin'ny solifara kôlôly ny orana. Ny zavamaniry eo an-toerana dia mila mihetsika ihany koa "Kratan" na "Akreksom."
Raha hitanao fa maty tamin'ny voloko fotsy ny taolanao, dia izao no fanontaniana: "Inona no tokony hatao?" tokony hitsangana aloha.
Ny loko volondavenona amin'ny jerany dia miseho amin'ny endriky ny mena. Ny ravina akaiky kokoa ny tany dia mijaly indrindra.
Fantatrao ve? Ny karazana pelargonium sasany dia manana toerana mitovy amin'ny natiora, izay tokony ho raisina an-tsakany koa rehefa manao famandrihana.
Mipoitra ny volokano noho ny:
fampitaovana amin'ny ririnina;
mandritra ny fanoloana ny tany;
noho ny habetsahan'ny haavon'ny trano sy ny tany;
drivotra mahatsiravina sy rano be.
Ny mahita ny fisian'ny volombava eo amin'ny voniny, mila miala avy hatrany ny faritra voan'ny aretina ary mitondra ny zavamaniry amin'ny fungicide. Azonao atao àry ny misakana ny fiantraikany ratsy amin'ny bibikely izay sahy mampifandray ny voninkazo.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny antony mahatonga ny geranium miverina amin'ny mavo, ny fitsaboana ny jerany